Vatema tii Vagadziri - China Nhema tii Fekitori & vatengesi
Zhenghe Gongfu dema tii ndeimwe yevatatu maGongfu matema matema muFujian Province (Zhenghe, Tanyang, Bailin), uye zvakare iri yepamusoro-soro tii teki yeShandong Province pakati peFujian nhema tii. Zhenghe Kungfu tii imhando yebhawa tii ine mhando yepamusoro yemhando yepamusoro yegomo tii muFujian nhema tii. Kugadzira kune nhoroondo yeanopfuura makore mazana maviri.
Lapsang Souchong Nhema Tea Harney & Vanakomana Akanaka Mateki
Lapsang Souchong, anozivikanwawo saLapushan Souchong, ndewevatema tii chikamu uye ari pamwe anonzi Souchong nhema tii ine marudzi ekugadzira. Yakatanga kugadzirwa munzvimbo yeTongmu yeChong'an County, Fujian Province (Chong'an yakabviswa mudunhu iri muna 1989 ikanzizve Wuyishan City). Iyo yekutanga tii tema munyika, inozivikanwawo seyakavamba yeti nhema. Iyo ine nhoroondo yeanopfuura makore mazana mana. Yakagadzirwa nevarimi vemuno tii munzvimbo dzakadzika dzeWuyi Mountain muFujian pakati kusvika kunonoka Ming Dynasty.
Yongchuan Xiuya inozivikanwa tii-yakaita tsono tii, iri yegreen tii chikamu. Yakagadzirwa uye ikaburitswa neiyo Tea Research Institute yeChongqing Academy yeAgriculture Sayenzi muna 1959. Muna 1964, yakatumidzwa zviri pamutemo zita rekuti Yongchuan Xiuya naiye anozivikanwa mudzimba tii nyanzvi, Muzvinafundo Chen Lun.
Pfupiso kusumwa kweYingde nhema tii Yingde nhema tii, hunyanzvi hweYengde Guta, Guangdong Province, chibereko cheChina National Geographical Indication. Yingde yazvino tii indasitiri yakatanga muna 1955, apo inozivikanwa imba yekudyara tii chirimwa -Yunnan Dayezhongcha yakabudirira kuyedzwa-kugadzirwa; muna 1959, Yingde nhema tii yakabudirira kuyedzwa-kugadzirwa naYunnan Dayezhongcha. Kubvira payakatanga, Yingde nhema tii yave ichizivikanwa sematai makuru matatu matema muChina, pamwechete naYunnan Dianhong naAnhui Qihong, yechitarisiko chayo chakaenzana uye chakatsvinda, dema uye rakatsvuka ruvara, mutsvuku uye wakajeka muto wemuto, uye hwema hwakapfuma uye hwakachena .
Wholesale Dema Tiyi 100% Natural Hutano Yixing Dema Tiyi
Yixing nhema tii, inogadzirwa muYixing, Jiangsu, inofanirwa kuverengerwa se "Su Hong" muboka reti. Nzvimbo inogadzira tii ndeyaMakomo eTianmu. Iyo tii inoratidzirwa neyakaomeswa knotted chimiro uye nerima ruvara. Iko hakuna kupatsanurwa kweYixing nhema tii pachayo. MuYixing, inogona chete kusarudzwa kuita shizha tii, yakaputsika tii, yakachekwa tii, uye isiri-tii inoenderana neiyo tii chimiro.
Chinese Tea yeTan Yang Kungfu Nhema Tea Tea
Iyo ndeimwe yematatu makuru eGongfu matema matema muFujian Province. Sekureva kwengano, yaive yakabudirira kuyedzwa-yakagadzirwa nevanhu veTanyang Village, Guta reFu'an panguva yeXianfeng neTongzhi makore eQing Dynasty. Pave nemakore anopfuura zana kubva ipapo.
Honorary mazita: "Tea King", "Yakakurumbira Tea Mubairo", nezvimwe.
Fu'an "Tanyang Gongfu" nhema tii ndiyo yekutanga kune matatu makuru eGongfu matema tii muFujian. Iyo inogadzirwa kubva kumabhureki nemashizha emunyika akanakisa tii muti akasiyana Tanyangcai tii sezvinhu zvakasvibirira. .
Qimen Nhema Tea Yekutanga Qi Hong Jinzhen 2021 Nyowani Tea
Qi Hong Jinzhen ndiyo inozivikanwa Gongfu nhema tii munyika yangu, hupfumi hwetsika Gongfu nhema tii, ine nhoroondo yekugadzira yemakore anopfuura zana zana. Chimiro chinoratidzika kunge tsono uye tsiye, kunge tsiye dzemusikana dzemusikana, dzakasimba uye dzakaonda, ruvara rwakasviba uye runopenya, uye vhudzi regoridhe rinoratidzira ruvara rwegoridhe. Ine hwema hwakajeka hwemaorchid. Nekuti inoratidzika kunge tsiye dzemusikana dzemusikana, vamwe vanhu vanozviti Qi tsiye.
Jiuquhongmei inonzi "Jiuquhong", inova chimwe chigadzirwa chetsika yechibhakera muRuwa rweXihu uye hupfumi pakati pematei matema. Iyo hwema hune hwomutambarakede muchero unotapira uye caramel kunhuhwirira, muto wetii unotapira uye wakapfava, une humwe huremu, hauna kugadzikana kwemuromo, uye ine zvishoma astringency. Mushure mekunwa, muromo zviri pachena kuti unotonhorera. Nyowani uye nenyasha, sekuona mukadzi anotapira weJiangnan.
Dianhong Gongfu tii ndeyeboka revatema tii. Iyo naDianhong yakapwanyika tii nhema inowanzotengeswa kuEastern Europe nyika dzakaita seRussia nePoland, pamwe nenyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu ari kuWestern Europe neNorth America. Inotengeswa mudzimba mumaguta makuru kutenderera nyika. Zvinwiwa zvaDianhong zvinonyanya kusanganiswa neshuga nemukaka, uye kunhuwirira uye kuravira mushure mekuwedzera mukaka zvichakasimba. Dianhong Gongfu Tea ndeye yakanyatso kuviriswa tii ine inodziya hunhu. Kunwa hakuiti kukurudzira dumbu uye kwakanakira muviri.
Bai Lin Gong Fu Hong Cha Tea neChineseTea
Bailin Gongfu hunyanzvi hwekugadzira tii hwapfuudzwa kweanopfuura makore mazana maviri nemakumi mashanu. Yakambove yakanyorwa se "Matatu Gongfu Matema Matema eMinhong" padivi peTanyang Gongfu Tea uye Zhenghe Gongfu Tea. Bailin Gongfu Tea inogona kubatsira kugaya kwemudumbu, kukurudzira kudya, diuresis uye kubvisa edema. Iyo inonakidzwa nemukurumbira wepamusoro zvese kumba nekune dzimwe nyika kune hunyanzvi hwakagadzirwa nemaoko uye yakasarudzika uye mhando yepamusoro. Iyo yakakosha kwazvo isingabatike tsika yetsika munhoroondo yaFuding.